Baadhitaankii lagu hayay xidhiidhka Trump iyo Ruushka oo waji cusub yeeshay | Hangool News
Baadhitaankii lagu hayay xidhiidhka Trump iyo Ruushka oo waji cusub yeeshay
October 26, 2019 - Written by Hangool
Dib u eegistii uu William Barr ku sameeyay baaritaanka uu waday Muller ayaa isu baddashay baaritaan ku saabsan faldambiyeed
Waaxda caddaaladda ee dalka Mareykanka ayaa billowday baaritaan dhinaca dambiga ah oo lagu sameynayo baaritaankii uu waday wakiilkii hore ee khaaska ahaa Robert Mueller.
Bishii May ayaa la billaabay dib u eegis lagu sameynayay baaritaankaas ku saabsanaa suurtagalnimada in faragalin lagu sameeyay doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016-kii.
Hase ahaatee, in baaritaanka hadda loo baddalo mid dhinaca dambiga ah waxay ka dhigan tahay in loo baahnaan doono markhaatiyaal iyo macluumaad.
Madaxweyne Trump ayaa marar badan baaritaankan ku tilmaamay “arrin la siyaasadeeyay oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo isaga”.
Baaritaanka lagu sameynayay Faragalintii la tuhmay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee 2016-kii laguma ogaanin wax dambiyo ah oo muujinaya in xiriir uu ka dhaxeeyay madaxweyne Trump iyo Moscow. Laakiin lama caddeynin in madaxweynuhu uu ku xad gudbay caddaaladda iyo in kale.
Warka ku saabsan in qaabka faldambiyeedyada loo baarayo arrintan ayaa markii ugu horreysay lagu soo daabacay wargeyska New York Times.
Wargeyska ayaa sheegay in wali aysan kala caddeyn dambiyada ay suurtagalka tahay in laga helo baaritaankaas.
Maxay tahay sababta loo baaray warbixintii Mueller?
Dib u eegista warbixinta oo la billaabay bishii May ayaa socotay ilaa hadda. Waxaa gacanta ku hayay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr waxaana howsheeda waday dacwad oogaha guud ee federaalka John Durham.
Mr Durham ayaa loo howlgaliyay inuu go’aan kasoo saaro sharci ahaanshaha xogta laga aruuriyay ol’olihii madaxweyne Trump ee doorashadii dhacday 2016-kii.
Waa nin si weyn loo qaddariyo oo horay u sameeyay baaritaanno la xiriira wakiillada hay’adda FBI-da iyo dambiyada la maleego.
Wuxuu sidoo kale baaritaanno kusoo sameeyay muuqaallo laga duubay su’aalo weydiinta ay sameeyaan saraakiisha laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA-da.
Bishii April, Mr Barr ayaa xubno ka tirsan aqalka wakiillada ee Congress-ka u sheegay inuu aaminsan yahay in “la basaasay” ol’olihii Trump ee doorashadii 2016-kii, wuxuuna intaas ku daray: “Su’aashu waxay ka taagan tahay in si ku talagal ah waddada loogu banneeyay arrintaas iyo inkale. Aniguna ma dhahayo ku talagal looma sameynin sidaas laakiin waa inaan caddeeyo”.
Dadka qaar ayaa Mr Barr ku eedeeyay inuu dib u eegis ku sameeyo baaritaanka, iyagoo sheegay in uu tallaabadaas qaaday isagoo danaha madaxweynaha ka hormarinaya danaha caddaaladda.
Balse Madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uusan Mr Barr ku amrin inuu dib u eegista ku sameeyo warbixinta laga soo saaray baaritaanka, Inkastoo uu yiri: “Waxaan aad ugu faraxsanahay tallaabada uu qaaday xeer ilaaliyaheenna, wuxuu sameeyay arrin aad u fiican”.
Maxaynaan ogeyn hadda?
Ilaa hadda, waaxda caddaaladdu ma aysan caddeynin nooca uu yahay dambiga laga baarayo warbixinta.
Sidoo kale ma cadda sababta baaritaankan hadda loo billaabay, ama waxa horseeday toona.
Inkastoo ay waaxda caddaaladda qudheeda u xilsaartay Robert Mueller inuu baaritaan ku sameeyo faragalinta lagu sameeyay doorashadii 2016-kii, haddana baaritaankan faldambiyeedka ah wuxuu ka dhiganyahay in waaxdu ay hadda iyada lafteeda sameyneyso baaritaanka.
Maxay tahay warbixinta Mueller?
Xogta lagu aruuriyay warbixinta Mueller oo ka kooban 448 bog ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax dambi ah oo ka muuqda xiriirka la sheegay inuu dhex maray ol’olihii Trump iyo xukuumadda Moscow, 2016-kii.
Hase yeeshee, waxaa warbixintaas lagu sharraxay 10 dhacdo oo ku saabsan suurtagalnimada in Mr Trump uu isku dayay faragalinta hannaanka baaritaanka.
Mueller ayaa sheegay in madaxweynuhu uu kasoo horjeeday in baaritaan lagu sameeyo
Waxaa kale oo warbixinta lagu qeexay in Ruushka uu faragaliyay habsami u socodkii doorashada Mareykanka ka dhacday 2016-kii.
Faragalintaas waxaa lagu sameeyay dhinaca baraha bulshada iyo sidoo kale in sirdoonka milatariga Ruushka ay jabsadeen kumbuyuutarradii xisbiga Dimuqraaddiga, sida ay warbixinta Mueller sheegtay.